Ngathi-Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
UFujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2005 eFujian, China, inkampani yethu yinkampani ye-high-tech egxila kwi-R & D, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yezinto ezisetyenziswayo zokuprinta. singoyena mvelisi ubalaseleyo kunye nenkokeli yeengcali kwicandelo le-Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Mzalwana, kunye nolunye uphawu oludumileyo olukhethekileyo.
➢ Iphrinta ye-Inkjet Ink efana ne-ink ye-sublimation, inki ye-pigment, inki yedayi, inki ye-dtg, inki ye-UV, inki ye-eco solvent, inki ye-solvent njl.
➢ Ubungakanani obahlukeneyo bomshicileli we-Epson inkjet, njengobungakanani be-A3 A4, 61cm kunye ne-111cm ubukhulu bokuprinta;
➢ I-Ink enganyuliyo yoNyulo (inki yesilivere ye-nitrate yesilivere) kunye nesiphawuli esingacimekiyo esetyenziselwa iPalamente okanye uMongameli wokuVota e-Afrika nakumazwe aseAsia ngomgangatho olungileyo kunye nexabiso lelona jolise kuthi;
➢ Ipeni Ink efana nebhodi emhlophe ye-inki, ipeni yomthombo, inki yokudibanisa, isinki yotywala esetyenziselwa zonke iintlobo zokubhala;
➢ TIJ2.5 Coding kunye nokumakisha njengeprinta yokufaka iikhowudi, amanzi kunye ne-inki yokunyibilikisa, amanzi asekwe kunye nesinyibilikisi esisekwe kwi-inki esetyenziselwa ukushicilela ibhakhowudi;
Emva kwayo yonke loo nto, asiziboneleli nje ngee-inki, kodwa sivelisa isisombululo esenziwe ngokwezifiso ezihambelana ncam neemfuno zakho kunye nezo zabathengi bakho kunye nokubonelela ngenkonzo ebanzi ye-OEM ngophawu lwethu lweemarike zasekhaya nezangaphandle. Amandla ethu amatsha alele kuphuhliso lwee-inki zokuprinta izisombululo, nakwizinto ezisetyenziswayo, itekhnoloji kunye nokusetyenziswa. Oku kuthetha ukuba iimveliso ezisandula ukwenziwa zinokufakwa kwintengiso ngoko nangoko.
Sihlala siqala izinto ezintsha kwaye siphendula kwanasemva kwesigaba sophuhliso. Inkqubo yethu ekhethekileyo kunye neemeko eziguquguqukayo iyasivumela ukuba sifezekise yonke iminqweno yakho. Silandela oku ngokukuxhasa kwisiza sokwandisa iinkqubo zakho kunye nokuqinisekisa ukuhanjiswa okuthembekileyo nokukhawulezayo kusetyenziswa uthungelwano olusebenzayo.
Abasebenzi abazinikeleyo ababelwe wena baya kukuxhasa kuwo onke amanyathelo eprojekthi kwaye baqiniseke ukuba imibuzo yakho iya kuphendulwa ngokukhawuleza kwaye iminqweno yakho yenziwe ngokuthe ngqo. I-Obooc enepakethi epheleleyo yezisombululo ezizodwa yenza umahluko kwaye ifumanise ngakumbi malunga nohlobo lwezisombululo ezinenzuzo kunye nazo zonke ezibandakanya ziya kukwenza uphumelele.
Abasebenzi bethu bakunceda ngazo zonke iimfuno zakho. Asiziboni njengabavelisi be-inki elula kodwa amaqabane akho athembekileyo. Oku kubandakanya ukuvelisa ii-inki ezikumgangatho ophezulu kunye nokucwangcisa ukuhanjiswa kwazo kuwe kunye nokubonelela ngenkxaso yobuchwephesha eyenziweyo. Sibonelela ngezona zisombululo zoqoqosho kulo lonke ixabiso lakho.
Sijonge ukudala usuku oluhle kunye nawe.